Sanadguuradii Afaraad ee Dowlada Puntland oo lagu qabtay madaxtooyada Boosaaso(Warbxin+Sawiro)
January 9, 2013 12:29 am GMT - Written by PP - Edited by PP
Boosaaso: (pp)- Magaalada Boosaaso, ee xarrunta madaxtooyada Puntland ayaa Caawa lagu soo gaba-gabeeyey Munaasabad lagu maamuusayey sanadguuradii Afaraad ee ka soo wareegatay dowlada hadda talada Haysa ee Puntland, waxaana hafladaas lagu soo bandhigay taariikdii ay Puntland soo martay iyo meesha ay taagan tahay maanta.
Puntland oo looga dabaaldegay sanadguuradii Afaraad ee dowlada hadda Jirta
Xafladaas ayaa waxaa ka hadlay Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Faroole, G/kuxigeenka baarlamaanka Puntland Salaad Xareed , Wasiirka Amniga Puntland Gen. Khaliif Ciise Mudan, Wasiiruldowlaga maamul wanaaga Puntland Maxamed Faarax Ciise Gaashaan, Saraakiil, Isimo iyo waxgarad kale oo ku nool magaalada Boosaaso.
Daawo Sawiro badan
Khudbada oo lagu furay Ayaadaha quraanka ayaa waxaa ka hadlay Sh. Axmed oo goobta kasoo jeediyey waano iyo Tusaalayn uu u jeediyey dadkii Islaamka ahaa ee goobta fadhiyey, wuxuuna Sheekhu Caawa aad ugu dheeraaday ka hadalka nabadgelyada iyo Waalidiinta in ay la socdaan Awlaadooda , kuna barbaariyaan Cabsida Illaahay iyo ka dheeraanshaha dhiiga Dadka Islaamka ah.
Gaashaan oo Difaacay Sanadka M. F. Ciise Gaashaa
Gaashaan ayaa Caawa difaacay Jiritaanka dowlada, isagoo sheegay in Qodobka 79-aad uu qeexayo waqtiga Madaxweynaha & kuxigeenkiisu ay haynayaan Xilka, wuxuu Gaashaan sheegay in Dib u habayn weyn lagu sameeyey Puntland dhan walba leh , wuxuuna sheegay waxa dowlada Puntland ay ka qabatay Puntland inay tahay wax aan la dhamayn karin , wuxuuna shacabka u sheegay in looga baahan yahay wada shaqayn , si loo gaaro himilooyinka Puntland ay doonayso.
Khaliif Ciise Mudan oo ka hadlay Nabadgelyada
Wasiirka Aminiga Puntland ayaa aad uga hadlay ammaanka deegaanada Puntland, wuxuuna ugu baaqay shacabka Puntland inay dowlada kala shaqeeyaan nabadgelyada. Ammaanka Puntland ayuu ku tilmaamay mid la isku halayn karo soona hagaagaya. Ciidamada amaanka ayuu sheegay in yihiin kuwo heegan ku jira isla markaana u diyaar ah qofkii isku daya inuu nabadgelyada wax u dhimo.
Qaar ka mid ah Nabadoonada Puntland oo hadlay
Waxaa xaflada ka hadlay Nabadoono ay ka mid yihiin Xaaji Catoosh iyo Dhagcad, kuwaas oo iyagana goobta ka soo jeediyey hadalo waano ah oo ay shacabka ugu baaqayeen inay adkeeyaan Wadajirkooda iyo nabadgelyada Puntland. Nabdoon Catoosh ayaa taabtay in arrimaha ay ka mid yihiin Caafimaaka , Waxbarashada iyo Nabadgelyada ay ka mid yihiin waxyaalaha ay wax ka qabtay dowlada hadda jirta, loona baahan yahay in la sii wado, halka Nabadoon Dhagcad uu sheegay dhankiisa in ammaanka illaahay iyo horrumarka illaahay ugu manaystay Puntland u kordhiyo.
Guddoomiyaha Haweenka Gobolka Bari
Guddoomiyaha Haweenka G. Bari, Maryan Guduudo
Waxaa xaflada ka hadalay Maryan Guduudo ah guddoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Bari , waxayna Marwado sheegtay in hooyooyinka Puntland ay had iyo jeer ka shaqeeyaan nabada ayna ka go’an tahay inay adkeeyaan nabadgelyada gobolka. Maryan Guduudo waxay ammaan u jeedisay dowlada Puntland iyo siddii ay ugu guulaysatay barnaamijka Xisbiyada badan, arrinkaas guul u ah shacabka Puntland ayna si fiican u taageerayaan.
Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Puntland
Guddoomiyaha Rugta ganacsiga Saciid Xuseen Ciid oo isla ka hadlay xaflada ayaa ka waramay Ganacsiga Puntland iyo dhaqaalaha , wuxuuna sheegay in Puntland dhaqaale xumada ka jirta ay la wadaagaan Soomaaliya , wuxuuna guddoomiyuhu xusay in dowlada Puntland iyo rugta ganacsigu ku heshiiyeen inay wada shaqeeyaan si loo abuuro hay’ado shaqo ganacsiga loo wanaajiyo. Wuxuu guddoomiyuhu aad u amaanay Barnaamijka Xisbiyada badan ee Puntland ay ka hirgelisay dowlada C/raxmaan Faroole, wuxuuna guddoomiyuhu xusay in Barnaamijka Xisbiyada badan uu fure u yahay mustaqbalka deegaanada Puntland, loona baahan yahay in la taageero.
Guuddoomiyaha Rugta ganacsiga Puntland Saciid Xuseen Ciid ayaa dowlada ka dalbaday in ay u samayso Safiiro Puntland u qaabilsan dhanka ganacsiga dalalka ay Puntland ganacsiga ay wadaagaan, wuxuuna xusay in sanadka cusub Rungta ganacsiga Puntland ay barnaamijyo badan ugu jiraan oo lagu wanaajinayo laguna hormarinayo ganacsiga Puntland.
Ugaas Xasan Ugaas Yaasiin oo Fariin Waano ah diray
Ugaas Xasan Ugaas Yaasiin oo ah Ugaasyada soo jireenka ah ee Puntland , ayaa marka hore gacan qaaday Madaxweynaha Puntland, kaddibna wuxuu u dhaqaaqay dhanka Makarafoonka , isagoo ka sheekeeyey guulihii laga gaaray ansaxinta dastuurka Federaalka Soomaaliya , uuna ka mid ahaa Isimadii meeshaas tegay oo wax ka ansaxiyey.
Ugaaska ayaa ku baaqay in nabadgelyada Puntland meel looga soo wadajeesto , dowladda hadda jirtana Gacan weyn la siiyo , si ay u gudato shaqooyinka horyaala. Wuxuu Ugaasku sheegay in dhaqaale xumida jirta ay soomaaliya oo dhan ka jirto, loose baahan yahay in ganacsatadu iskaashato. Dekeda Boosaaso ayuu ku tilmaamay in mar Soomaaliya oo dhan ay ka shaqeyso, marka ay xiran tahay oo aan waxba ka soo degin. Ugaasna ayaa kama danbeystii sheegay in Soomaaliya oo dhan aysan hagaagsanayn, laakiin dhanka kale wuxuu qiray meel Puntland ka ammaan badan in Soomaaliya aysan ka jirin.
Garaad C/llaahi Ciid oo si aan Gabasho la hayn uga hadlay sanadka xukuumada loo kordhiyey
Garaad C/llaahi Cali Ciid
Af-hayeenka Isimada untland Garaad C/llaahi Ciid ayaa khudbadiisa ku sheegay inuu taabanayo meelo mucayin ah, Wuxuuna sheegay in sanadka dheeriga ah uu yahay mid ansax ah , ayna taageerayaan, Wuxuuna kaloo sheegay Sanad kaddib in doorasho loo diyaar garabo. Garaadka ayaa aad u amaanay Barnaamijka xisbiyada badan ee Puntland laga dhaqan geliyey, wuxuuna ku tilmaamay mid taariikhi ah, wuxuuna Waano ku jeediyey in Puntland wanaageeda laga wada shaqeeyo. Dhalinta soo koraysa ayuu faray Garaadku inay kaalintooda muujiyaan, dalka wax qabadkiisa ku dadaalaan.
Garaadka ayaa kama danbeystii ku waaniyey shacabka Puntland inay ku dhegenaadaan Nabadgelyada ay maanta ku naaloonayaan oo aan gacanta laga bixin.
Beeldaajiyeyaal iyaga ka hadlay Xaflada
Beeldaajiye Cali Faarax
Beeldaajiye Cali Faarax & Beeldaaje Cismaaciil Beeldaajiye Yaasiin ayaa iyaguna qaybtooda waanada iyo baraarujinta ku biiriyey codkooda Isimada kale, waxayna ku baaqeen in nabadgelyada la adkeeyo, wuxuuna Beeldaajiye Cali Faarax Tusaale u soo qaatay Ducadii Nabi Ibraahim oo uu kaga dalbaday nabadgelyada Illaahay (SWT), wuxuuna illaahay ka baryey in deegaanada Puntland Nabada ku sugo.
Madaxweynaha Puntland oo hadlay Madaxweynaha Puntland
Madaxweynaha Puntland ayaa lagu soo dhoweeyey Makarafoonka , wuxuuna ka sheekeeyey dowlada uu hogaanka u hayo markii ay la wareegtay masuuliyada Puntland, wuxuu Madaxweyne faroole xusay in markii uu Xukunka fariistay uu la kulmay Caqabado badan laakiin ay ka gudbeen, wuxuu sheegay madaxweynuhu in dowladiisa ay ammaanka wax badan ka qabteen.
Madaxweynaha Puntland ayaa wuxuu xusay in Puntland ay u dhiseen ciidamo xoogan oo dhan kasta leh, wuxuu sheegay oo kale in Dagaalo caalamiya ay la galeen Alshabaab kana guulaysteen, haddana ay weli u heelan yihiin ciidamada qaranka Puntland ay ka difaacaan deegaanada Puntland.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Puntland ay ka hirgaliyeen mashaarciic badan oo maanta qabanaya Indhaha , wuxuuna sheegay in oo kale in Garoomada ay wax ka qabanayaan sidda garoonka Boosaaso oo ay wax qabanayso shirkad Talyaani, iyo Ganacsiga Puntland oo ay sii ballaarinayaan dhanka Ethiopia.
Shirarkii Caalamiga ahaa
Wuxuu guulweyn Faroole ku tilmaamay Shirarkii Caalamiga ahaa ee ka dhacay Puntland sidda Garowe1&2 , Gaalkacyo 3 iyo Dastuurka ay hadda ku shaqayso DF ee Soomaaliya ay hirgelinteeda ka danbeysay Puntland, Puntland la’aanteedna aysan waxba suuroobeen. Wuxuu madaweynuhu ku faanay oo kale in dowladiisu ay hirgelisay arrin Guul iyo mustaqbal u ah shacabka Puntland oo uu ulla jeeday meel marinta Tastuurka cusub ee Puntland iyo furitaanka asxaabta badan ee laga jagleelay Puntland , wuxuuna ku tilmaamay Barnaamijka xisbiyada badan mid meesha ka saaraya xeerar soo shaqaynayey sanado badan oo ay adkaatay in laga gudbo sanado badan. ” Waxaan doonayaa Inshaa’alaahu annoo jooga in ay Indhahayga qabtaan Puntland oo so xor ah u dooratay qofkay doonayaan” ayuu yiri madaxweyne Faroole.
Madaxtooyada guddaheeda ayaa lagu daawaday Film muujinayey Ansixinta shirkii bishii April iyo sidda loo codeeyey, waxaana xarrunta madaxtooyada marti sharaftii shirkaas ka qayb qaadatay ay maqsuud ka noqdeen taariikhda loo soo maray Dastuurka Cusub ee Puntland.
Madaxweynaha oo ka digay in lagu tunto Sharciga federaalka
Madaxweynaha ayaa ka digay in sharciga federaalka lagu tunto, wuxuuna ku celceliyey in dalka aan dib loogu celiyo dagaal sokeeye , wuxuu kaloo sheegay madaxweynahu in shacabka dega jubbooyinka laga daayo carqaladaynta si ay u samaystaan maamulkooda. Wuxuu u degay Madaxweynaha dowlada Federaalka soomaaliya , ” Waxaan maqlay in madaxweyanaha DF ee Soomaaliya afkiisa ay kasoo yeertay in sharciga Federaalku uusan shaqayn karin, wuxuuna sheegay arrinku inuu siddaas ahayn oo cagaha loo dhigo wixii lagu heshiiyey”.
Madaxweynaha oo Weeraray Gen. Samatar iyo Gablax
Madaxweynaha ayaa sheegay kuwa sheeganaya Mucaarad umma naqaano mucaarad , waa kuwa ka hadlaaya danna mooday in laga hadlo Idaacadaha Argagaxida , madaxweynaha ayaa sheegay in Mucaarad ay u yaqaanaan Xisbiyada cusub ee ka hirgalay Puntland. Gablax iyo Gen. Samatay ayuu madaxweynuhu ku sheegay kuwani aysan kala jeclayn ammaanka Puntland.
Idaacadaha qaarkood ayuu madaxweynuhu sheegay in ay Puntland ka howlgalaan, laakiin qaarkood ayuu ku sheegay in yihiin kuwo kuhowlan in Puntland ay burburto. Mar uu ka hadlayey Ceelasha Puntland ee shidaalka ayuu sheegay in labada Ceel midi maran yahay , laakiin dib loogu soo laabanayo mar kale.
Xafladaan ayaa marka laga fiiriyo meelo badan, waxaa fadhiyey Isimada qiimo iyo qaayo leh Puntland, waxaa kaloo fadhiyey Nabadoono aad loo yaqaanay bulshada Puntland, iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo lagu soo casumay Xaflada, iyadoo xafladaasi ay kusoo gaba-gabowday Jawi aad u wanaagsan oo soo jiitay marti sharaftii xafladaas ka soo qayb gashay.